မနက်စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့ သူတွေ ၊ မနက် ဆိုရင် စောစောထရမှာ ပျင်းတဲ့သူတွေ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ ။ – စှယျစုံသုတ
မနက်စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့ သူတွေ ၊ မနက် ဆိုရင် စောစောထရမှာ ပျင်းတဲ့သူတွေ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ ။
“စောစောထ တဲ့ငှက်က အစာပိုဝတယ်” တဲ့ ။ အဲဒီလိုပဲ လူသားတွေမှာ လည်း ဝီရိယရှိရှိ နဲ့ စောစောထ ၊ ဘဝအစီအစဉ်တွေ အတွက် မနက်ခင်းတွေကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်တဲ့ သူတွေက အောင်မြင်မှုရဖို့ ပိုမို လွယ်ကူတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
မနက်စောစော ဆိုတာ အရုဏ်တက်ချိန် ၄-၅ နာရီကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မနက် ၆နာရီလောက် ထရင်ကို တစ်နေ့တာ အတွက် ကောင်းကောင်း လုံလောက် နေပါပြီ ။ မနက် ၆နာရီ အိပ်ရာထသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ကတော့
၁။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စတွေ ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ အချိန်ပိုရလို့ … ။
၂။ တစ်နေ့တာ အတွက် အချိန်ဇယားဆွဲဖို့ အချိန်ရလို့ …..။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့အတွက် မနက်ခင်းက အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်နေလို့ …. ။
၄။ အလုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်ချိန် ပိုရတဲ့အတွက် မနက်စာကို အေးအေးဆေးဆေး စားနိုင်လို့ …. ။
၅။ မနက်စောစောထတဲ့သူတွေက သူများတွေထက် ခြေတစ်လှမ်း ပိုသာနေတတ်လို့ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မနက်အိပ်ရာ စောစောထခြင်းက သင့်ဘဝကို ပိုမိုတိုးတက်စေတယ် ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့နော် ။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကို သာမန်ထက် ၂နာရီ နဲ့ မိနစ် ၃ဝပိုစောပြီး ထတတ်တဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ ။ ဒီလိုဆိုရင် တစ်ပတ်စာအတွက် သင့်မှာ အချိန်ပို ၁၇နာရီခွဲ ရလာမယ် ။
#credit original writer
မနကျစောစော အိပျရာမထတတျတဲ့ သူတှေ ၊ မနကျ ဆိုရငျ စောစောထရမှာ ပငျြးတဲ့သူတှေ ဒီစာစောငျလေးကို ဖတျကွညျ့ပါ ။
“စောစောထ တဲ့ငှကျက အစာပိုဝတယျ” တဲ့ ။ အဲဒီလိုပဲ လူသားတှမှော လညျး ဝီရိယရှိရှိ နဲ့ စောစောထ ၊ ဘဝအစီအစဉျတှေ အတှကျ မနကျခငျးတှကေို အကောငျးဆုံး အသုံးခနြိုငျတဲ့ သူတှကေ အောငျမွငျမှုရဖို့ ပိုမို လှယျကူတာကို တှရေ့ပါတယျ ။
မနကျစောစော ဆိုတာ အရုဏျတကျခြိနျ ၄-၅ နာရီကို ဆိုလိုတာ မဟုတျပါဘူး ။ မနကျ ၆နာရီလောကျ ထရငျကို တဈနတေ့ာ အတှကျ ကောငျးကောငျး လုံလောကျ နပေါပွီ ။ မနကျ ၆နာရီ အိပျရာထသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျးတှေ ကတော့
၁။ ကိုယျစှမျးကိုယျစတှေ ကို ထုတျဖျောနိုငျဖို့ အခြိနျပိုရလို့ … ။
၂။ တဈနတေ့ာ အတှကျ အခြိနျဇယားဆှဲဖို့ အခြိနျရလို့ …..။
၃။ ကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတကျအောငျ လုပျဖို့အတှကျ မနကျခငျးက အကောငျးဆုံးအခြိနျ ဖွဈနလေို့ …. ။
၄။ အလုပျသှားဖို့ ပွငျဆငျခြိနျ ပိုရတဲ့အတှကျ မနကျစာကို အေးအေးဆေးဆေး စားနိုငျလို့ …. ။
၅။ မနကျစောစောထတဲ့သူတှကေ သူမြားတှထေကျ ခွတေဈလှမျး ပိုသာနတေတျလို့ ပဲဖွဈပါတယျ ။
မနကျအိပျရာ စောစောထခွငျးက သငျ့ဘဝကို ပိုမိုတိုးတကျစတေယျ ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့နျော ။ နတေို့ငျးနတေို့ငျးကို သာမနျထကျ ၂နာရီ နဲ့ မိနဈ ၃ဝပိုစောပွီး ထတတျတဲ့ အကငျြ့လုပျပါ ။ ဒီလိုဆိုရငျ တဈပတျစာအတှကျ သငျ့မှာ အခြိနျပို ၁၇နာရီခှဲ ရလာမယျ ။